Amandla oluntu akhanya ngenkqubo yokufunda ye-IMEX America
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Amandla oluntu akhanya ngenkqubo yokufunda ye-IMEX America
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 18, 2021
5 imiz efundwayo
Ngokutsho kweDalai Lama: "Ngaphandle koluntu, akukho namnye umntu onokuphila." Ukubaluleka kokuhlala kwabahlali kuyo yonke inkqubo yokufunda kwi-IMEX America, ngo-Novemba 9-11, kunye neeseshoni ezigubungela amandla okubalisa amabali, amaxabiso ekwabelwana ngawo kunye nobume bomntu.
Imfundo yasimahla igubungela amandla okubalisa, amaxabiso ekwabelwana ngawo kunye nobume bomntu.
Intatheli uSharad Kharé uza kuqhuba umasifundisane malunga nokubalisa amabali kunye nezakhono ezingaziwayo kangako zokuphulaphula amabali.
USharad uza kukhokela abathathi-nxaxheba kudliwanondlebe olunomdla wokukhuthaza abanye ukuba baqwalasele indlela ibali lomntu elinokulakha ngayo ilifa labo.
Ubulumko bukaDalai Lama buyaziwa kwintatheli uSharad Kharé owambamba wamsayina, kunye namanye awona magama makhulu eHollywood, kwezamashishini nakwinkcubeko, njengenxalenye yendima yakhe njengomseki-mbumbano weHuman Biography. USharad uza kuzisa indibano yocweyo yokubalisa amabali kunye nezakhono ezingaziwa kangako zokuphulaphula amabali. Kwiseshoni yesibini, "Liyintoni ilifa lakho?" USharad uzakukhokela abathathi-nxaxheba kudliwanondlebe olunomthambo oluya kukhuthaza abanye ukuba baqwalasele ukuba ibali lomntu lingalakha njani ilifa labo.
USharad Kharé, uMququzeleli weQonga leBuntu
Iintetho zesimbo seTED ziyancipha kwindalo yomntu
I-Biology yomntu ngomnye wemibutho emithathu ehambisa intetho ye-TED ekhawulezayo yomlilo ngexesha lomboniso. Ezi ntetho zigxile kwimimandla eyahlukeneyo yobume bomntu. Ihlabathi elithandekayo ngumbutho ojolise ekuncedeni amaqela-ukusuka kwiinkwenkwezi zezemidlalo ukuya kwiingcali zeshishini-ukukhawulezisa ukwenza iibhondi ezinzulu. Indlela yabo yokubalisa amabali ixhaswa sisayensi kwaye iqela licacisa ukuba "uphononongo lubonakalisile ukuba ukufumana intsingiselo elungileyo kwiziganeko zangaphambili kunxibelelana nokuzithemba okupheleleyo nolwaneliseko lobomi." Ukuzibandakanya nabo zii-TLC Lions ezasekwa ngu-Gian Power owashiya umhlaba wobumbano emva kwentlekele yosapho kwaye wakha uluntu. Isiphumo liqela lehlabathi labantu abangakholelekiyo - "iingonyama" - ababelana ngamabali abo, amadabi kunye noloyiso ukuze baxhase kwaye bakhuthaze abanye. UGian ucacisa esithi: “Ndikwiphulo lokwenza indawo yokusebenza ukuba ihehe ngokweemvakalelo, iindawo apho ubathembayo abo bakungqongileyo, apho amaqela azive ngathi ziintsapho zesibini. Ayisiyonto elungileyo ukuyenza kuphela kodwa inyanzelekile kwishishini kwaye inxibelelana ngokuthe ngqo kwimveliso yomntu kunye neyeshishini. ”
Isiseko esomeleleyo esidibanisa uluntu sabelwa amaxabiso ekwabelwana ngawo-hayi amanani abantu. Ngokutsho kukaDavid Allison, umsunguli weValuegraphics. Ingcali ekuziphatheni kwabathengi, uDavid ungumcebisi kwiimveliso zehlabathi kunye nommeli ophambili wokulahla iingcinga zabantu abaphelelwe lixesha. Kwiseshoni ekhethekileyo ye-Headliner yabantu abaya kwi-IMEX America, uyakutyhila iziphumo zophando lomhlaba oluhlolisisa ukubakho kwimisitho kunye nokuzibandakanya emva kwesifo. Oku kulandelwa luthotho lweendibano zocweyo ngeentsuku ezintathu zomboniso kubandakanya enye echazwe "njengomboniso womdlalo weqonga, indibano yocweyo" eyilelwe ukudibanisa amachaphaza phakathi kwexabiso lomntu kunye nemibono yoyilo eqhutywa lixabiso.
Umvelisi womnyhadala wehlabathi uMelissa Park naye uthatha indlela entsha yokucinga ngokutsha kweziganeko kwimozulu eguqukileyo yeshishini. Kwintlanganiso yakhe Ukwakha ngokutsha umsitho wobuqu Uyakucebisa ngendlela yokudibanisa amandla kunye nemincili yomsitho obukhoma kunye namava agudileyo nakhuselekileyo, esabelana ngezifundo ezivela kubavelisi bomculo.
Imfundo esexesheni eyilelwe zonke iindlela zokufunda
UCarina Bauer, iCEO yeQela le-IMEX, ucacisa ukuba kutheni umxholo woluntu ufike ngexesha elililo: “Ngoku kukho ukuqonda okuhlaziyiweyo kokubaluleka kokwakha uluntu. Kwabaninzi kolu shishino, umboniso ubonakalisa ithuba elikhethekileyo lokudibana noogxa kunye namaqabane angababonanga phantse kwiminyaka emi-2. Sifuna ukunika ababekho ithuba lokuba baphinde banxibelelane kwaye bandise ubuchule babo, ngezixhobo zokwenza uluntu lwabo kwiintlanganiso nakwiminyhadala. Siye sayila inkqubo yethu yokufunda ngokujonga izinto ezahlukeneyo zokuba kuthetha ntoni ukwakha nokuba yinxalenye yoluntu - kwaye iiseshoni zethu zikhokelwa ngabantu abathile abakhuthazayo abanamabali amnandi ukubalisa. ”
Inkqubo yokufunda yasimahla e IMEX America isungula NgoMvulo weSmart, onikwe amandla yi-MPI, nge-8 kaNovemba kwaye uqhubeka noluhlu lweeworkshops, iitafile zezihloko ezishushu kunye neesemina ngeentsuku ezintathu zomboniso-zonke ziyilelwe ukujongana neendlela ezahlukeneyo zokufunda.
IMEX America yenzeka ngoNovemba 9-11 kwindawo entsha-eMandalay Bay, eLas Vegas- nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Bhalisa inzala Apha.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neenketho zokuhlala kunye nokubhukisha Apha.
Iinqwelomoya zeLufthansa Group zongeza i-440 entsha yase-US, eSpain...
Ngaba amakhefu esixeko angabuyekeza intsilelo kwi...
I-COVID-19 ecetywayo yokunciphisa idatha / amanyathelo okususa ...
I-JA Solar ibonelela ngombane oluhlaza kwiMidlalo ezayo...
Iindlela zoKhuseleko zongeza kwiqela lolawulo
Iindidi ezintlanu eziphambili zokhenketho ezixoxwe ngo-2021
I-India State ngoku iJolisa kuKhenketho oluQinisekayo
Abathwali beenqwelomoya baseMelika babonwe kwintlango yaseTshayina
I-Moderna CEO: Ubhubhane we-COVID-19 uza kuphela phakathi ku-2022
Iqela leFraport: Ingeniso kunye nengeniso yesambuku phezulu kakhulu...
ICanada yenza ugonyo kunyanzelekile ...
Icandelo laseJamaica lezoKhenketho liqhuba uQoqosho olunamandla ...
Itshokholethi entsha yeVegan yenyama
I-UNWTO iValela uShicilelo oluBalulekileyo kwiMarike yokuHamba yeHlabathi
Abakhenkethi abangenazo i-booster shots banokungena kwaSirayeli kuphela...
I-China ihlawula ibhonasi eyimali ngokuxela i-COVID-19 entsha...
I-UNWTO iya eSaudi Arabia ekubanjweni: uNobhala-Jikelele ...
Usuku lweZizwe eziManyeneyo: Ixesha lokuBhiyozela kunye nokuCoca...
Iqela elitsha lobunkokeli libhengezwe nguAprecia
I-FTA ibongoza iiarhente zokuhamba zase-US ukuba zonyuse ugonyo ...
Brits: Sikhupheni endlini nihambe nge holiday
I-Boeing ityhala abathuthi abatsha be-737-800BCF
Abantu abasi-8 babulawa kungquzulwano kwihip-hop yaseHouston ...
IBrazil yonwabile ngeeNtlanganiso e-Expo Dubai 2020
IJamaica "iyayishukumisa" ngeNew ...
Ixabiso eliphantsi nelona xabiso lihamba ngeedolophu ezintlanu e-US
Sinda kwaye uchume! UNWTO, lixesha lokuba uyile kwakhona ...
Kutheni ubhabha iFinnair ngeHelsinki kwihlabathi?
Iimveliso zePelican ziya kufunyanwa yiPlatinum Equity
IMEX America: Kulungile ukubuya!
Abantu baseCanada ngoku banokuBhukha kuVavanyo lwePCR kwiHotele eJamaica...
I-Chile iyavula kwakhona kubakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo
I-Air Tanzania iyalela umthuthi omtsha weBoeing kunye nabakhweli ...
IKigali iye eDoha iindiza ezingapheliyo ngoku kunye neQatar Airways ...
IForam ye-17 yaseBeijing-Tokyo. Intsebenziswano entsha yedijithali...
IATA ibhengeza izithethi zeNgqungquthela yeHlabathi yoThutho loMoya ...
I-EasyJet ibaleka kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick kuZinzo ...
Iinqanawa ezimbini zokuhamba ngeenqanawa ezifowuna e-Ocho Rios Jamaica Kule Veki
I-Southwest Airlines ayizukubacima umlilo abasebenzi bayo ...
Iinqwelomoya eziya eLondon Heathrow zisuka eCalgary eWestJet ngoku
Ingxelo entsha yeWTTC yokuqhuba ukubuyisa kunye nokuphucula ...
I-China eKhokela iNdlela ngoQoqosho lweGlobal Green
I-St. Regis San Francisco Inika amagama uMlawuli Jikelele omtsha
Isixhobo sokuhlola saseMelika: iRussia ingavala i-Facebook entsha ...
I-China ukwenza ukuhambisa idatha ngaphandle kwelizwe ngumcimbi...
Ixabiso leLufthansa sele liza kunyuka nge-US $ 2.5 ...
Isiseko seembadada sikhuthaza ithemba elitsha eJamaica
IiViking Cruises: Yintoni entsha?
Xa usiya kulala kubaluleke kakhulu kunolala ixesha elingakanani Disemba 2, 2021
Abaphandi e-ZOE, inkampani yesayensi yezempilo, kunye neqela lamazwe ngamazwe elaziwayo lokulala kunye nenzululwazi yemetabolism yase-UK, e-US, [...]
Olu suku olutsha kwi-UNWTO linyathelo elikhulu lokuHamba, uKhenketho, kunye noQoqosho lweHlabathi Disemba 2, 2021
I-Genital Psoriasis: Iziphumo zeSifundo esitsha Disemba 2, 2021
U-Amgen namhlanje ubhengeze iziphumo ezilungileyo eziphezulu ezivela kulingo lwe-DISCREET, iSigaba se-3, i-multicenter, i-randomized, i-placebo-controlled, i-double blind-blind study ukuvavanya ukusebenza kwe-Otezla® (i-apremilast) kubantu abadala abane-moderate ukuya kwi-psoriasis ye-genital kunye ne-moderate to. i-psoriasis enzima kakhulu.
Ukutshintsha iiJets zokulwa zaseKhanada ngeziNtsha Disemba 2, 2021
Njengenxalenye yomgaqo-nkqubo wokhuselo, “Owomeleleyo, Ukhuselekile, Ubandakanyekile,” uRhulumente waseCanada ufumana iijethi zokulwa eziphucukileyo ezingama-88 zeRoyal Canadian Air Force (RCAF) ngenkqubo yokhuphiswano eya kuqinisekisa ukuba iimfuno ze-RCAF ziyafezekiswa ngelixa eqinisekisa. ixabiso best for Canadians.
Izigulana zoMhlaza wamabele waKwangoko zinokuluphepha uNyango lweKhemo Disemba 2, 2021
Kuphononongo, abafazi be-postmenopausal abane-1 ukuya kwi-3 i-nodes emihle kunye ne-Recurrence Score® iziphumo ze-0 ukuya kwi-25 zibonisa ukuba akukho nzuzo kwi-chemotherapy emva kweminyaka emihlanu yokulandelelana, oku kuthetha ukuba banokuphepha imiphumo emibi yonyango.
Ukuxinana kweBone: Isixhobo esitsha soMlinganiso wokuQhawuka komhlaba Disemba 2, 2021
"Abantu bahlala bemangalisiwe xa befunda ukuba ukuxinana kwamathambo yinxalenye enye yokuba namathambo anamandla aphilileyo. Enyanisweni, izigulane ezininzi ezifumana ukuphuka ngenxa yamathambo anqabileyo azikho i-osteoporotic bone density," kusho uDkt. Paul Hansma, i-UC Santa. UBarbara uNjingalwazi weFiziksi owayila itekhnoloji emva kweBone Score™.
I-Avinca Airline ibona usuku olutsha lweBrand: Amanyathelo okuPhuma kwiBhanki Disemba 2, 2021
I-Avianca Airline ibingumthuthi weflegi yaseColombia ukusukela nge-5 kaDisemba, 1919. Namhlanje, inkampani yeenqwelomoya iphumile kwisimo se-11 sokutshona.
I-Omicron: Isisongelo esitsha okanye akukho nto ibalulekileyo? Disemba 2, 2021
I-Omicron - olona tshintsho lutsha olusele luzonakalisile iimarike kwaye lubangele ukuvalwa kokuhamba ukusuka kumazwe athile akumazantsi e-Afrika - lunokuphazamisa ukuchacha okutsha kweshishini lehotele, ngakumbi ukuba izicwangciso ziqhubela phambili ukuqinisa imigaqo-nkqubo yovavanyo, njengase-US.
Iingcali zibonisa iAthene indlela entsha yokwenza iShishini Disemba 2, 2021
IsiXeko saseAthene kunye ne-International Association of Professional Congress Organizers (i-IAPCO) badibanisa amandla ngokusebenzisa i-Destination Partnership entsha egqitywe ngexesha le-IBTM World 2021.
IJamani ngoku ifumana incasa yeSeychelles kuMnyhadala wokuQala woMzimba Disemba 2, 2021
Emva kweenyanga zokugxila kwimisitho ebonakalayo kunye neewebinars, iTourism Seychelles yabamba umnyhadala wabo wokuqala eJamani, okoko kwaqala ubhubhane, nge-18 kaNovemba ka-2021.
EJamaica: Uphononongo olutsha loQeqesho oluKhethekileyo Disemba 2, 2021
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett, uye wabonisa ukuba i-American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), iqabane elibalulekileyo le-Jamaica Centre of Tourism Innovation (JCTI), livumile ukupapasha isifundo esikhethekileyo soqeqesho olujoliswe kwi-Jamaica. Isigqibo senziwe ngenxa yokuba, okoko intsebenziswano yaqala kwiminyaka emine eyadlulayo, ngaphezulu kwe-8,000 yabasebenzi bezokhenketho baseJamaican baye bafumana isatifikethi sobungcali.
Iindawo zokuchithela iimbadada ngoku ziqhuba iiNtsuku ezingama-40 zokuNika ngeeHolide Disemba 1, 2021
ISandals Resorts, eyona ndawo iphambili kwiCaribbean kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, iyaqhubeka nokubhiyozela iminyaka yayo engama-40 “ngeMinyaka engama-40 yoLuthando oluphiwayo.”
ISeychelles ayilolizwe eliXhathayo ngoku ngeOstreliya ngaphezulu kweOmicron eyahlukaniso Disemba 1, 2021
I-Seychelles ikhutshiwe kuluhlu lwamazwe angavunyelwanga ukuba angene e-Australia ngenxa yenkxalabo nge-Omicron, eyahlukileyo ye-COVID-19 engakhange ifunyanwe kuLwandlekazi lwaseIndiya.
I-Omicron ngoku ise-United States: Ingqinwe yi-CDC Disemba 1, 2021
Umntu waseMelika ogonywe ngokupheleleyo ovela eMzantsi Afrika uphantsi ngohlobo olutsha lwe-COVID-19 Omicron, ephakamisa iintsimbi kulo lonke elase-US.
Akukho lutshintsho kwi-UNWTO: UZurab Pololikashvili uqinisekisiwe njengoNobhala-Jikelele we-2022-2025 Disemba 1, 2021
Abaphathi bezoKhenketho kunye nabathunywa abamele amazwe angaphezu kwe-130 baba yijaji eMadrid namhlanje ekuthatheni isigqibo sokuba unobhala jikelele we-UN Affiliated Agency uya kuqhubeka eyikhokela kwiminyaka eyi-4 ezayo.